Qaybta 1.Benefits faylasha takhalusid si toos ah iyo folder ka weyn yahay dhawr maalmood
Qaybta 2.How in ay tirtirto files ka weyn yahay maalmood xxx on Windows gacanta / si toos ah
Qaybta 3.How in ay tirtirto files ka weyn yahay maalmood xxx on Mac OS gacanta / si toos ah
Dadka u muuqdaan in ay ku isticmaalaan laptop ama desktops in shuqulka oo ugu danbeyn ku yeelan doonaa weyn raso faylasha in ay tahay in ay kaliya in ay nadiifiso haddii ay u baahan yihiin si ay meel u samaysaa waraaqaha cusub. Laakiin taasi sahlan ayaa sheegay in ka badan sameeyo si gaar ah haddii aad leedahay tons oo tan oo files u baahan in la tirtiro. Sidaas waxa xalka ugu fudud? Xalka ugu fudud ee ay tahay in la dariiqa ugu wanaagsan in ay files yihiin in ka weyn yahay maalmood X tirtiray si toos ah ama xitaa gacanta. Laakiin ficilkan, tan lagu sameeyo in badan badbaadin karaan kuwo waqti badan.
Qeybta 1 Faa'iidooyinka files takhalusid si toos ah iyo folder ka weyn yahay dhawr maalmood
a) Faa'iidada ugu horeysay ay tahay in la xaqiiqda ah in uu ka saaraysaa Kanu waa warka culus ee la tirtiro tirada baaxadda leh ee files gacanta iyo mid mid. Iyada oo dad badan oo idinka mid ah oo kaliya laptop ah u isticmaalaan hawlaha ahaanshaha iyo wakhtiyada firaaqada ah waxaa laga yaabaa ma oga sababta ay tani waa si faa'iido, dadka inta badan waxay dejinayaan kun oo files maalin kasta u baahan yihiin gacan la takhaluso iyaga ka mid ah sidoo kale.
b) Habka noocan oo kale ah waa dariiqa ugu wanaagsan in laga takhaluso files in ay yihiin oo kaliya aad u waxtar lahayn si ay u dhawrto.
c) Waxay dadka oo Fayda Xumaanta ka qabo in la sameeyo hawshaas gacanta iyo iyaga oo aan haysan in la tensed ku saabsan files xaddi weyn oo meel kor. Tani waxay u ogolaaneysaa iyaga si ay u qabtaan hawlo ay ganacsi caadi ah oo aan ka walwal badan.
Part 2 Sidee in ay tirtirto files ka weyn yahay maalmood xxx on Windows gacanta / si toos ah
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad u tirtiri kartaa files ka weyn yahay maalmood xxx, mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud in ay sidaa sameeyaan on Windows waa in ay isticmaalaan "MSH tirto faylasha ka weyn" software. Waa software ah anfacaya in aanu soo qaadan oo aan wax badan oo meel, oo waxaa loo isticmaali karaa dad kombiyuutar ma isticmaalo si joogta ah.
Tani waa menu ugu weyn.
Waxaad u baahan tahay in ay doortaan waddo aad folder
Next, waxaad u baahan tahay inaad dhigay muddo ka dib oo aad rabto in aad ka articles tirtiray.
Waxaad u baahan tahay in ay doortaan noocyada files in aad rabto in aad tirtirto oo aad sidoo kale dooran kartaa size gaarka ah ee files in aad rabto in aad la tirtiro.
Waxaa aad u fiican in aad badbaadin dhammaan faylasha shaqadaada gal gaar ah. Taas ayaa ka dhigaysa shaqo fudud.
Part 3 Sida loo tirto faylasha ka weyn yahay maalmood xxx on Mac OS gacanta / si toos ah
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala MAC heshiin doonaa nala in MAC waa kaamil in badan oo ka mid ah dhinacyada, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah muuqaalada in u muuqdaan in ay aad u hesho wax badan oo ku saabsan dareemayaasha isticmaala. Mid ka mid ah muujinta sida waa Kabcada_ si toos ah fayl ku jira in ka weyn yahay XXX maalmood.
Waxaa jira tiro ka mid ah hababka this ha, laakiin mid ka mid fudud in MAC ogol yahay dadka isticmaala waa mid ka mid ah ka hadlaya qashinka cayriin.
Sida xirfadle shaqada, mid ka mid ah waxyaalaha aad samayn kartid si fudud u qaataan dhammaan faylasha iyo u dhig folder qashinka iyo markaas dhigay goobaha hab in qashinka waxaa si toos ah tirtiray a.
Samee gal ah dhammaan waxyaabaha la xiriira shaqada aad. Tani waxay ku siinaysaa fursad ah in ay u gudbiyaan dhammaan faylasha in ay qashinka aan gacanta xulashada file hal aad.
Marka aad la sameeyo shaqada, kaliya qaadan folder shaqada iyo wareejiso qashinka. Marka aad wareejinta qashinka arki kartaa dhammaan faylasha aad wareejiyo, kaliya kana dayi wax si deg deg ah, si loo ogaado oo kaliya in dhammaan faylasha qashinka waa kuwa run ahaantii aad rabto in laga takhaluso.
Markaasay aad u baahan tahay si ay u tagaan Menu ka Trash ceeriin iyo aad rabtid dooro. In la door waxaad fursad u haysataa in si toos ah tirto faylasha ka soo gudubtay xadka gaar ah ama ka weyn size gaar ah ka badan.
Sida lagu hayo ammaan ah oo aad samayn karin muddada qashinka ku koobnayn 30 maalmood. Fursaduhu waxa weeye in haddii qashinka ka weyn yahay 30 maalmood isticmaala si gaar ah ma u baahan tahay. Ilaalinta duration hoose ku yeelan karto arrimaha qaarkood, sida baahida loo qabo in faylasha sida iman kara.
Inta badan dadka waxaa lagu faaruqinta daasadaha qashinka si ay kor u meel dheeraad ah oo ay shaqo ku heli lahayd baaxadda fursadaha la xiriira arrin anfacaya.
Muuqaalka aad u muhiim ah in fiira gaar ah in noocan oo kale ah si toos ah u tirtira waa in ay tirtirtaa faylasha iyo fayl si joogto ah wax fursad ah ee soo kabsaday. Tani waxay noqon kartaa wax aad u fiican oo ka fiirsaneysa in shakhsiyaadka ma doonayaan waxyaalahooda gaarka loo leeyahay lagu soo kabsaday marka la tirtiray wanaag.
Waxaa jira qoraal ah oo aad u isticmaali karto in ay si toos ah u gudbiyaan content ee galka shaqada si aad u bin qashinka. Tani waxay xaqiijin doontaa in dhammaan hannaanka tirtirka yahay si toos ah ay dabiicadda.
Sidaas dib markii aad qotomisay folder shaqada, aad ordi karaan script soo socda si ay u gudbiyaan dhammaan xogta aad bin qashinka muddo qoray wakhti ka dib. Markaas habka kor ku xusan in la raaco karaan in ay tirtirto faylasha wareejiyo si toos ah.
In shaashada soo socda, script ayaa la isticmaalaa si ay u gudbiyaan mp3 files si bin qashinka, wax la mid ah waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan dukumiintiyo in bin qashinka, iyadoo la bedelayo mp3 la Eray bixin ku habboon dokumentiga.
Waxaa jira dhowr siyaabood in ay tirtirto fayl iyo files ka weyn yahay tiro cayiman oo maalmo. Mid ka mid ah ugu fudud ee lagu kor ku xusan. Isticmaalka mid ka mid ah hababka in aad ka heli haboon wuxuu noqon karaa mid si qumman oo si aad u hubiso in aad computer marnaba ku egyahay ee meel waraaqaha muhiimka ah aad.
Top 5 Qalabka Secure Delete in aad ka ogaato
Top Toban Players DVD Best u Mac
Sidee si ay u gudbiyaan Files From Mac in iPad
> Resource > Mac > Sida loo tirto faylasha ka weyn X maalmood on Windows ama Mac